Vaovao - Loka momba ny fifaninanana ao amin'ny Chamber of Commerce
Loka momba ny fifaninanana ao amin'ny Chamber of Commerce
13TH, OKTOBRA 2020
Ny lanonam-panokafana ny Ady yun Baituan tamin'ny taona 2020 dia natomboka tamin'ny 15 Aogositra ny orinasa ary nanao drafitra mazava momba an'io ady io, ary niara-niasa sy niasa nandritra ny fotoana ela ny tsirairay mba hahazoany voninahitra ho an'ny orinasa. manangana loka ihany koa.
Nandritra ny ady an-trano nisy ny corps Commerce, ny vatam-bolantsika "kotrokorana" antokon'orinasa tsirairay avy dia niara-nanome toro-hevitra sy drafitra, dia mifampianatra isika mba hanamafisana ny tenantsika. Samy naneho ny heriny rehetra tamin'ny ady ny sefo sy ny mpiasa
Nandritra ny lanonana mari-pankasitrahana, ireo fandaharana isan-karazany nomanin'ny Legion, ny fizarana fitantanana ny Komitin'ny ligin'ny Legion mpandresy, ary ny programa mifandraika amin'ny fanontaniana sy valiny momba ny fahalalana dia samy manome ny valisoa mazava sy mahafinaritra ary mahaliana. Ny fizarana tompona orinasa, avelao isika hahatsapa ny fisian'ny banga, amin'ny fitantanana sy ny fahalalana matihanina manana toerana hanatsarana. Ny tetikasa nokarakarain'ny Chamber of Commerce dia nahatonga ny orinasam-barotra vahiny Hebei hiray hina kokoa.
Ny orinasantsika dia mamintina ity fifaninanana ity, manovo ny tanjaky ny hafa ary mampihena ny banga. Ato anatin'ny volana vitsivitsy, hamafisinay ny ekipanay ary hanatsara ny maodelim-pitantananay. Handray endrika vaovao ny fianakavian'ilay orinasanay. Haavo avo lenta amin'ny fahaizana matihanina hihaonana amin'ny Ady ligy zato vaovao.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba anay ianao dia mifandraisa aminay hanatevin-daharana anay. Vonona izahay hiara-hiasa amin'ireo tanora maniry hanangana maodely ara-barotra iraisam-pirenena ary hahatsapa ny lanjan'ilay orinasa sy ny isam-batan'olona. Manantena izahay fa eo ambany fitarihan'ny nofinay, dia hahatratra ny fandresen'ny mpanjifantsika, ny orinasanay ary ny mpiasanay!